» को बन्छ नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता ?
को बन्छ नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता ?
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ११:३८
मकवानपुर, २३ जेठ । नेपाल आईडल सिजन ३ को उत्कृष्ट ४ छानिएता पनि वाईल्ड कार्ड राउण्डबाट पून एक जना छनौट हुने भएको छ । वाईल्ड कार्डबाट एक जना छानिएपछि पून ५ जनाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । वाईल्ड कार्डमा भिडेका मेघा श्रेष्ठ, मिग्मा लामा, किरण कुमार भुजेल, ममता गुरुङ र रचना रिमालमध्ये कसले बाजी मार्ने हो त्यो पर्खाईको विषय बनेको छ । वाईल्डकार्डबाट छानिएकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि यसअघि ४ जना धुरन्धर प्रतियोगीहरु छानिसकिएका छन् । ती ४ प्रतियोगीहरु हुन् सज्जा चौलागाई, प्रविण बेड्वाल, केभिन ग्लान तामाङ र नेशन पुन मगर । यी ४ जना प्रतियोगीहरु दर्शक श्रोताहरुमाझ निक्कै चर्चामा छन् । यी ४ जना प्रतियोगीहरुमध्येबाट कोही एक जनाले सिजन ३ को उपाधी पाउनेमा दर्शकहरु पनि आसावादी छन् तर वाईल्ड कार्डबाट को आउनेछन् भन्नेमा पनि द्विविधा छ ।
यी ४ प्रतियोगीहरु प्रस्तुतिका हिसाबले पनि उत्तिकै सशक्त छन् । त्यसैले यी ४ मध्ये को भन्दा को कम छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सजिलो छैन । अनि उनीहरुमध्ये सिजन ३ को विजेता को बन्ला भन्न सक्ने अवस्था पनि निकै जटिल छ । अझ भोटिङका आधारमा विजेता तय गरिने भएकोले यी ४ जना प्रतियोगीहरुमध्ये वा वाईल्ड कार्डबाट प्रवेश पाउनेमध्ये कसले टाईटल जित्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । तर उनीहरुको प्रस्तुतिहरुका आधारमा भने केही विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था भने छ । ४ जना प्रतियोगीहरुमध्ये प्रविण बेड्वालका प्रस्तुतिहरुले दर्शकको धेरै भ्यूज प्राप्त गरेको छ । प्रविणको सबैभन्दा भाईरल भएको प्रस्तुति ‘तिम्रो जस्तो मुटु’ बोलको गीत हो । उनले गाला राउण्डमा गाएको यो गीतलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा १२ लाख २ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो–
त्यस्तै भ्युजकै आधारमा हेर्ने हो भने केभिन ग्लान तामाङ दर्शकको रोजाईको दोस्रो स्थानमा छन् । उनको प्रस्तुतिलाई दर्शकहरुले अधिक रुचाएका छन् । उनको प्रस्तुतिहरुमध्ये सर्वाधिक भाईरल भएको प्रस्तुति ‘सधैँ सधैँ’ बोलको गीत हो । उनले यो गीत गाला राउण्डमा गाएका थिए । यस गीतलाई केविनले निकै सुमधुर प्रस्तुतिमा ढालेका थिए । यस भिडियोलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ५ लाख ८० हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भ्यूजकै आधारमा हेर्ने हो भने तेस्रो स्थानमा प्रतियोगिताकी सर्वाधिक अवार्ड विजेता सज्जा चौलागाई रहेकी छिन् । सज्जा चौलागाईको सर्वाधिक भाईरल भएको प्रस्तुति ‘नचाहेको होईन तिमीलाई’ बोलको गीत हो । सज्जाले यो गीत गाला राउण्डमा गाएकी थिईन् । यो प्रस्तुतिले दर्शकहरुको निक्कै प्रशंसा पाएको छ । यो प्रस्तुतिलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ५ लाख ५३ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । त्यस्तै दर्शक भ्यूजकै आधारमा दर्शकको प्रशंसा पाएका प्रतियोगीहरुको चौथो नम्बरमा नेशन पुन मगर रहेका छन् । नेशनको सर्वाधिक भाईरल भएको प्रस्तुति ‘आत्मामा तिम्रो’ बोलको गीत हो । नेशनले यो गीत बेस क्याम्प राउण्डमा गाएका थिए । यो गीतलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ३ लाख ४८ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
यसरी यी प्रतियोगीहरुको भ्यूजका आधारमा को सर्वाधिक चर्चामा छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिने अवस्था रहेता पनि वास्तविक रुपमा यही नै विजेता होला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । तपाईका विचारमा चाहिँ सिजन ३ को विजेता को बन्ला जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई शब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।